हरियो पहाडमा खजुर खेती तथा भेडा पालन - China Radio International
हरियो पहाडमा खजुर खेती तथा भेडा पालन
(GMT+08:00) 2020-07-14 09:20:37
गत महिना चीनका राष्ट्राध्यक्ष सी चिनफिङले कहाँको निरीक्षण गर्नुभयो? तपाईंलाई थाहा छ कि? हो त, नीङ स्या ह्वी जातीय स्वायत्त प्रदेशको। आजको कार्यक्रममा हामी नीङ स्या ह्वी जातीय स्वायत्त प्रदेशको चुङ नीङ जिल्लामा मा थ्यानच नामक गाउँलेको जीवन हेरौं।
मा थ्यानच चुङ नीङ जिल्ला हानच्याउश्वी बस्तीको एकजना किसान हुनुहुन्छ। पहिले हान च्याउ श्वी बस्तीले सुख्खा तथा गरिबको प्रतिनिधित्व गर्थ्यो। मान थ्यानचले आकाशद्वारा खाद्यन्न पाउनुपर्थ्यो। तर कृषिको उत्पादन ज्यादै कम भएका हुनाले उहाँ दर्ता गरिएको गरिब बन्नुभयो।
केही वर्षयता नीङ स्या ह्वी जातीय स्वायत्त प्रदेशको सरकारले पर्यावरणीय सुरक्षा परियोजना, वृक्षरोपण परियोजना र वन संरक्षकका लागि विपन्न उन्मुलन परियोजनाको कार्यान्वयन गरेको छ। यी पर्यावरणीय विपन्न उन्मुलन परियोजनाद्वारा पहेँलो नदीको पानी हानच्याउश्वी बस्तीमा प्रवेश गराइएको छ।